Guddoomiye Beyazgül wuxuu la wadaagay daraasadihii laga sameeyay khudbadiisa iyo mashaariicda la qorsheeyay in la fuliyo mustaqbalka. Duqa Beyazgül wuxuu yidhi, qalcadda gadaashiisa, 300 oo guri ayaa u riyaaqsan sarkaal kasta oo ka imanaya bannaanka. Waxaan u keenay 300-ka dhibanayaal guryahooda waqti aad u yar ka dibna Wasiirkayaga Deegaanka iyo Magaalayntu wuxuu yiri; 'Muuqaalka meeshan ayaa iska leh,' ayuu yidhi. Markaas dhegaheena ayaan u dhiibnay Şanlıurfa, wuxuu yiri, 'waad dhameysay qalcaddii quruxda badneyd, laakiin dhibaatadan burcadnimada ah sidoo kale dhibaato ayaa ka jirta Kızılkoyun' waxaanna nidhi 'si fiican'. Isla markii aan nimid, waxaan dhammeynay basaska iyo marinka goobta gawaarida iibiya waxaanan diyaarinay. Meelo kale oo xirfadleyaal ah, wadooyinkeenna tuuladeena, asphalt, xad-dhaafyada iyo howlo badan oo socda ayaa socda. Wadooyinkayaga, maktabadahayada iyo shaqooyinkeeniiba way socdaan. Markii duqa degmo kasta isku deyey inuu u sharraxo waxay ku sameeyeen show TV maalintii kale, baaqa wuxuu yiri: 'Waqtigu kuma filna halkan, waa inaan mid walboo midkiin gooni ah u qorsheysanahay'. Kuma filna in loo sheego goorta aan qabanay howlihii ay ahayd in la qabto muddo aad u dheer waqti aad u yar. Maxaan intaa ka sii qaban doonnaa; dhismahayada adeegga. Waxaan rajeynayaa inaan u soo bandhigi doonno dhismaha adeeggeenna wakaaladda waqti aad u yar. Beeraheena Qaranka mar labaad way sii socon doonaan, fidinta wadada Akçakale ee shaqadan sii socota. Mar labaad, iyagoo taageeraya waxbarashada sidii taageero buuxda, 270 kun oo arday ayaa la siiyay imtixaan tijaabo ah. Waxaan ka shaqeyneynaa biyo la cabbo, bullaacad, SHUSKI iyo aagag taariikhi ah, dhowaanna waxaan galnaa Açıksu Street. Waxaan sidoo kale wax ka qabannaa dhibaatada taraafikada ee sicirka. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Madaxweynaheyga Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha halkan. Waxay ku casuumeen wakiil ka socda qolka warshadaha 80 qof, halkaas oo lagu martiqaaday. Waxaan sidoo kale la kulannay xiriirkeenna annagaana sii wadna walaalkeen İbrahim Halil Peltekna nala qaadan doono. Burburinta warshadahaaga Istanbul, waxaan ku niri Urfa, waan wada shaqeyn doonnaa. Sababtoo ah waxaan sii wadi doonnaa xallinta shaqada, taasoo ah dhibaatooyinkayaga ugu muhiimsan, annaga oo leh ururradayada xirfadda leh. Shaqadeena adag ee aan la leenahay madaxdii Isweydaarsiga Badeecadaha, Ganacsadihii iyo Khaa'imiintii, Rugta Beeraha ayaa ku sii socota wadada horumarka ee Urfa. Waxaan hadaf leenahay, aan halkaan ku muujiyo, shaqaalayntu waa himiladeenna aad iyo aad u muhiim ah, waxaan ku xallin doonnaa midnimo iyo isku duubni xagga oggolaanshaha Eebbe. Laakiin sidoo kale waxaan yool ku leennahay dalxiiska. Urfa waxay noqon doontaa magaalo dalxiis. Waxaan go'aansanay inaan si buuxda uga furno agagaarka magaalada Urfa maxaa yeelay Urfa duug ah lagama helin magaalo kale. Waad diyaarin kartaa dhismayaal casri ah, waad ku sameyn kartaa tan meelkasta, laakiin Suuragal ma ahan in la aasaaso Şanlıurfa, oldanlıurfa taariikhi ah, xaruntan oo leh ku dhawaad ​​labo kun oo guri oo la diiwangeliyay, waxay noqon doontaa xarun dalxiis iyo dhaqan. Waxaan rabaa taageerada muwaadiniinteyda Şanlıurfa dabcan. Haa, waxaan weydiinayaa halkaan, ma tahay fikir furan in la furo agagaaraha Urfa duug ah? Kaalay oo ku qaado gacmahaaga oo gacmahaaga ku qaad halka darawalka uu qorayo asxaabteena. Laakiin waxaan idhi waxaan kaa doonayaa wax, saaxiibbadayda chauffeur, muwaadiniinteenu waa gaboobaan, carruur bay noqdaan, oo haween baan noqdaa, oo uur bay leeyihiin. Maanta, waan arkaa, waxaan u arkaa shaqo culus, uma imaanin inaan uga dacwoodo darawalada ka yimaada muwaadiniinteenna, waan u mahadcelinayaa waxaanan doonayaa inaan sii wado shaqada wadadan. Waxaan ku sii socon doonnaa annagoo wada jirna annaga iyo ururradayada xirfadda leh, Şanlıurfa iyo dadkeenna. Urfa waa horumarineysaa, Urfa waa horumarsan tahay, Urfa waa magaalo ganacsi, waxay noqon doontaa magaalo warshadeed, waxay noqon doontaa magaalo dalxiis. Cidina kuma hayn karto Urfa qorraxda, tamarta, carrada iyo dhalinyarada yar yar, Urfa way horumarin doontaa, Urfa wey isbedelaysaa. Diyaaradahayagu ha noqdaan kuwo nasiiban, ”ayuu yidhi.